Noho izany, nisy ny vavaka niarahana tamin’ireo ankizy mpianatra avy ao amin’ny Oratorio Don Bosco Ivato ny alatsinainy 16 Martsa nandritra ny sivy andro. Araka ny fantatra moa dia mandringana tokoa ity valan’aretina ity eto amin’izao tontolo izao, ary mbola tsy nahitana fanafany hatramin’izao. Nandritra ny fotoam-bavaka izay notaritin’i Frère Fabrice SDB dia nandohalika avokoa ny rehetra teo anoloan’ny sarin’ny masin’i Maria, ho mariky ny fiankohofana sy fanetretenan’ny tsirairay, ary namerina ny vavaka nampianarin’i Don Bosco. Tahaka an’i Don Bosco, dia tokony hanana fahatonian-tsaina sy fahatokisana feno an’i masin’i Maria vonjin’ny kristianina.
Matokia azy isika ary mivavaha tsy tapaka amin’ny fanalalanany mba hiarovan’Andriamanitra sy hanampiany antsika amin’ity valan’aretina ity ary koa hankaherezany ireo marary ; handry amp-piadanana anie ny fanahin’ireo efa nodimandry rehetra. Masin’i Maria vonjin’ny kristianina mivavaha ho anay.
Frera RAZAFIMANDIMBY Michel Fabrice, sdb